Wasaaradda waxbarashada XFS oo deeq waxbarasho u direysa Ardeydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka dowladda | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda waxbarashada XFS oo deeq waxbarasho u direysa Ardeydii kaalmaha hore ka...
Muqdisho (SNTV):- Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Feysal Cumar Guuleed,wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ,ayaa maanta kulan wadajira la qaatay 10-kii ardey ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii ay qaaday wasaaradda waxbarashada ee 2017 iyo 2018-ka.
Madaxda wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ayaa 10-ka ardey ee kaalmaha hore ka galay imtixaanka dowladda u ballan qaaday inay waxbarasho dibadda u diri doonto.
‘’Ka wasaarad ahaan waajib ayaa naga saaran sidaan u dhisi laheyn aqoonta ardayda Soomaaliyeed,waxana naga go’an in aan meel sare gaarsiino arday kasta waxana ay qeyb ka tahay hamigeena dhow”ayuu yiri wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada.
Wasiiro dowlaha wasaaradda waxbarashada Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle (jaabir) ayaa ardayda kala hadlay hamigooda ah heerka ay doonayaan in ay ka garaan waxbarashada,wuxuuna u balan qaday in ka wasaarad ahaan ay garab istaagi doonaan.
Previous articleDuqa Muqdisho oo Qoys Soomaaliyeed ku wareejiyey guri muddo ka maqnaa
Next articleWasiirka Arrimaha Gudaha XFS oo maanta xafiiskiisa kula kulmay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya